प्रधानमन्त्री ओली प्रभु साहसँग किन भए क्रुद्ध ? - Sankalpa Khabar
प्रधानमन्त्री ओली प्रभु साहसँग किन भए क्रुद्ध ?
६ असार ११:१९
काठमाडौं । भनिन्छ, राजनीतिमा जे सोचिन्छ त्यो हुन्न । जे सोचिँदैन त्यो भएरै छाड्छ । यस्तै नियति भोग्दैछन् अहिले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका आधा दर्जन स्थायी कमिटी सदस्य ।
सत्तारुढ एमाले यतिबेला आफैं भुमरीमा फसेको छ । पार्टी फुट्ने हो कि टुट्ने हो कुनै ठेगान छैन । तर, फागुन २८ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरिशंकर चौधरीलगायतका नेता न त एमाले न त माओवादी केन्द्रकै भएका छन् । त्यसैले टोपबहादुर र प्रभु साह हालै निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफूहरूको पार्टी कुन हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
अहिले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गर्ने नेताहरुको केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ । खासगरी माओवादी नेता प्रभु साह र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकतालाई बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि ‘अब कसरी अगाड़ी बढ़ने ?’ भन्ने विषयमा मतभेद बढ़न थालेको देख़िन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रभु साहले नेकपाकै राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशाको निरन्तरता हुनुपर्ने अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद नभई जनताको जनवादसहितको राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशा हुनुपर्ने, एकताकै भाव झल्किने गरी पार्टीको नयाँ नामाकरण हुनुपर्ने, पार्टीको सांगठनिक गतिविधि पनि एकताकै भावअनुरूप हुनुपर्ने अर्थात् पार्टीको आगामी महाधिवेशन पनि एकताकै महाधिवेशन गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेपछि केपी ओली असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ । सोही कारण दुवै नेताबीच दरार उत्पन्न भएको स्रोतले बतायो ।
एमाले ब्यूँतेपछि पार्टीको निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) मा प्रभु साहले हालसम्म पनि हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रोशित भएको बताइन्छ ।
ओली समूहको बैठकमा हातपात, कुर्सी विध्वंश
७ श्रावण १५:२३
पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदीले काठमाडौं किङ्ग्स–११ बाट खेल्ने
११ श्रावण १४:२८
महन्थको राजनीतिक भविष्य दाउमा
११ श्रावण ०९:३७
११ श्रावण १७:१८
कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने– स्थानीय तहको अधिवेशनको तालिका हेरफेर…
८ श्रावण १३:२५